Adeegyada Visa - Milyan sameeyayaasha
Caawinta Visa ee
Waxaan u bixinaa xalka loo habeeyay shaqsiyaadka, qoysaska, ganacsatada yar yar, shirkadaha ugu waa weyn adduunka ee sida ugu fiican adiga ugu shaqeeya.
Nala wadaag shuruudahaaga annagana waan kuu hagi doonnaa sida, adduunka oo dhan.
Adeegyadeena ugu muhiimsan ee la xiriira Kaalmada Visa
Xulo Dal loogu talagalay Adeegyada Visa
Wadamada Visa-yada ugu sareeya
Dalxiiska & Ganacsiga
Ajaaniibta u safreysa Argentina si ay dalxiis iyo ujeedooyin ganacsi u lahaadaan waxaa la siiyaa fiiso 90 maalmood ah markay yimaadaan, umana baahna inay dalbaan fiiso kahor. sidaa darteed iska hubi inaad ka hubiso safaaradda waddankaaga ee Argentine ama Qunsuliyadda ka hor intaadan safrin safarka wixii macluumaad kale ah oo laga heli karo Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Argentine.
Waxaad dalban kartaa fiisahaan keliya haddii aad iska diiwaangelisay machad waxbarasho oo ku yaal Argentina oo ay oggolaadeen waaxda socdaalka ee dalka Argentina. Sida caadiga ah waa ansax ilaa koorsooyinka aad qaadaneysaa ay si rasmi ah u dhammaadaan, oo aan la cusbooneysiin karin.
Visa qandaraas la galiyay
Fiisayaashan waxaa loogu talagalay shaqsiyaadka qorsheynaya inay ku noolaadaan Argentina oo ay u shaqeeyaan shirkad Ajnabi ah oo ka diiwaangashan wasaaradda socdaalka, oo loo fasaxay inay shaqaaleeyaan shaqaale ajnabi ah. Waqtiga intiisa badan, waad dalban kartaa fiisahaan kahor ama ka dib markaad dalka soo gasho.
Qof kasta oo caddeyn kara dammaanadda ugu yar ee billaha ah ee ah $ 8,500 ARS oo u dhiganta $ 2,200 USD, oo dammaanad ugu leh dhigashada koontada bangiga Argentine ayaa dalban kara fiisaha noocaas ah. Ilaa iyo inta codsaduhu soo bandhigi karo dukumiinti muujinaya in dakhligu sii socon doono inta ay ku noolyihiin Argentina, waxay codsan karaan fiisaha Financier.
Dalbashada fiisada Howlgabnimada, sida fiisada Financier, qofku wuxuu ubaahanyahay inuu lahaado daqli ugu yar ee dalbashada fiisada Pensioner wuxuu ubaahanyahay inaad cadeyso dakhliga ugu yar bilkasta $ 8,500 ARS (kudhowaad $ 2,200 USD). Lacagta waa in lagu dhigaa baanka kasta ee Argentine.
Dukumiintiyada badanaa la codsado markii la dalbanayo waa:
Baasaboor leh ansax ah ugu yaraan 6 bilood ka dib taariikhda la soo galay
Foomka buuxinta foomka
Afar sawir oo baasaboor cabbir ah oo casri ah
Boos celinta tikidhada safarka wareega
Boos celinta hudheelka ama warqad martiqaad ah oo ka timid saaxiib ama qoyska ku nool Argentina
Jeeg-bixinta bixinta khidmada dalabka
Caddaynta lacagaha haddii codsaduhu awoodo inuu is difaaco isaga / iyada
Dukumiintiyada kale ee lagaa codsan karo waxaa ka mid ah: shahaadada dhalashada, shahaadada guurka asalka ah, shahaadada asalka ah ee furiinka (haddii ay jiraan), dukumiinti kasta oo lagu beddelayo magaca, iwm. Dukumiintiyadaan oo dhan waa iney noqdaan kuwo nootala oo laga been abuurtay ee dalka soo saaristooda, ka dibna loo tarjumay Isbaanish oo ay sharciyeeyeen maxkamada reer Argentine.
Dhammaan muwaadiniinta Midowga Yurub
Kuwa haysta Baasaboorada wadamadan soosocda waa inay adeegsadaan Shahaadada Socdaalka ee ay soo saartay Argentina halkii ay ku siin lahayd fiiso markay safrayaan:
Sidoo kale waa in la xusaa in muwaadiniinta Bolivia, Braziil, Kolombiya, Chile, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay iyo Venezuela howsha helitaanka sharciga deganaanshaha ku meelgaarka ah ay aad uga sahlan tahay, fududahay oo aan la soo koobi karin. Tan waxaa lagu samayn karaa qunsuliyada Argentine ee dibedda ama gudaha Argentina. Ogolaashaha wuxuu soconayaa labo sano, waana la cusbooneysiin karaa.